Tsy Mampaninona ve Izay Mozika Henoiko? | Manontany ny Tanora
“Mandefa mozika aho rehefa miomankomana amin’ny maraina. Vao tonga ao anaty fiara aho, dia mandefa mozika. Mihaino mozika koa aho rehefa maka aina ao an-trano, na manadio. Na mamaky boky aza aho mbola mihaino mozika ihany. Mozika foana ny fiainako.”—Carla.
Tia mozika hoatran’i Carla ve ianao? Ho hitanao amin’ity lahatsoratra ity hoe inona ny soa azo avy amin’ny mozika sy ny fandrika mila ialana. Hanampy hanao hahay hifidy ny mozika henoinao koa izy ity.
Ny soa azo
Hoatran’ny sakafo ny mozika. Hahasoa anao izy io raha tsara, sady antonony ny habetsahany. Diniho izao:
Mampifalifaly ny mozika.
“Alefako ny mozika tiako indrindra rehefa malahelohelo aho. Tonga dia hoatran’ny maivamaivana izany aho.”—Mark.
Mampahatsiaro ny taloha ny mozika.
“Matetika no misy zavatra tsara tadidiko rehefa maheno hira anankiray aho. Faly foana aho isaky ny maheno an’ilay izy.”—Sheila.
Mampiray saina ny mozika.
“Nanatrika fivoriambe iraisam-pirenena nataon’ny Vavolombelon’i Jehovah aho, indray mandeha. Latsa-dranomaso aho rehefa natao ny hira famaranana. Samihafa fiteny izahay nefa nampiray saina anay ny mozika.”—Tammy.
Manampy anao ho tsara toetra ny mozika.
“Hahay hifehy tena sy hanam-paharetana ianao raha mianatra mitendry zavamaneno. Tsy hainao vetivety mantsy ilay izy. Hihamahay kosa ianao raha manao fanazaran-tena foana.”—Anna.
Fantatrao ve? Hira 150 no ao amin’ny Salamo, ilay boky lava indrindra ao amin’ny Baiboly.
Fidio tsara ny mozika henoinao, hoatran’ny ataonao amin’ny sakafo ihany
Mety hanimba toy ny sakafo misy poizina ny mozika sasany. Nahoana?
Betsaka ny hira miresaka mivantana momba ny firaisana.
“Hoatran’ny hoe tsisy afa-tsy firaisana no resahin’ny hira malaza rehetra. Sady efa tsy afenimpenina intsony ilay izy.”—Hannah.
Hoy ny Baiboly: “Aoka tsy hotononina eo aminareo akory izay resaka momba ny fijangajangana sy izay rehetra mety ho fahalotoana na izay faniriana tsy mety afa-po.” (Efesianina 5:3) Saintsaino hoe: ‘Hita amin’ny mozika henoiko ve fa tsy manaraka an’io torohevitra io aho?’
Mety hahatonga anao halahelo be ny mozika sasany.
“Tsy mahita tory aho indraindray dia mihaino mozika. Avy eo anefa aho lasa mahatadidy zavatra mahakivy. Misy mozika mahatonga anao ho hoatr’izany.”—Tammy.
Hoy ny Baiboly: “Arovy ny fonao, mihoatra noho izay rehetra tokony harovana.” (Ohabolana 4:23) Saintsaino hoe: ‘Mahatonga ahy hifantoka amin-javatra mahakivy ve ny mozika henoiko?’
Misy mozika mahatonga anao ho tezitra.
“Misy mozika mampirisika ny olona ho tezitra sy hankahala ny tenany na ny olon-kafa. Nisy vokany tsikelikely tamiko ny karazana mozika hoatr’ireny. Tsikaritro hoe niova ny fihetseham-poko rehefa avy nihaino azy ireny aho. Nahamarika an’izany koa ny fianakaviako.”—John.
Hoy ny Baiboly: “Esory aminareo ... ireto rehetra ireto: Fahatezerana, fahavinirana, faharatsiana, fanevatevana, ary resaka vetaveta lazain’ny vavanareo.” (Kolosianina 3:8) Saintsaino hoe: ‘Mahatonga ahy hasiaka na tsy hiraharaha ny fihetseham-pon’ny hafa ve ny mozika henoiko?’
Fehiny: Mahaiza mifidy. Niezaka nanao an’izany i Julie. Hoy izy: “Jereko matetika ny hira ao amiko, dia esoriko izay ratsy. Tsy mora foana aloha ilay izy e, fa fantatro hoe izay no tokony hataoko.”
Hoy koa i Tara: “Indraindray tsara be mihitsy ny hira mandeha amin’ny radio. Avy eo anefa henoko ny tonony, dia tonga dia hitako hoe mila ovana ilay onjam-peo. Hoatran’ny hoe nihinana mofomamy tsara be aho, nefa vao avy nanaikitra indray mandeha fotsiny dia tsy maintsy nanary an’ilay izy. Fa raha mahavita tsy mihaino hira miresaka firaisana aho, dia azo antoka kokoa hoe hahavita tsy hanao firaisana alohan’ny fanambadiana. Mila ataoko an-tsaina foana hoe misy vokany be amiko ny mozika.”
“Mety hisy vokany be amin’ny fihetseham-ponao ny mozika. Raha tsy mitandrina ianao, dia mety hahatonga anao ho kivy ny mozika fidinao. Mety tsy ho tsapanao akory izany, raha tsy efa voa ianao.”—Abigail.
“Mety tsy ho afaka ao an-dohanao intsony ny hira iray, na dia vao indroa aza ianao no naheno azy. Aleo àry tonga dia ajanona ny hira raha vao mampiahiahy. Raha tsy izany dia hiraikitra ao an-tsainao ilay izy.”—Robert.
Resadresaka Momba ny Mozika
Ahoana no Hifidianana Fialam-boly Mahasoa?
Jereo ato ireo zavatra telo tokony hoeritreretinao alohan’ny hifidianana fialam-boly.